Iindaba-Nge-Epreli 26, i-2019 iMiboniso yaBadala yaShanghai yasungulwa ngokusesikweni kwiNgqungquthela yokuGqwesa iZizwe ngeZizwe yaseShanghai kunye neZiko leMiboniso!
Isikali salo nyaka sikhulu, ngaphezulu kweenkampani ezingama-300 ezithatha inxaxheba, kwaye umgangatho wesithathu weholo yomboniso uhlelwe ngokupheleleyo! Iinkampani zangaphandle zilungisiwe kwindawo yomboniso wamazwe aphesheya ukunciphisa umgama phakathi kwabaphulaphuli kunye neempawu zamanye amazwe.
Ababonisi basekhaya ikakhulu ngamashishini ezinto ezisetyenziswayo, izinto zocwangciso losapho kunye neoyile yokutshiza, kwaye zininzi iinkampani zoonodoli zokwenene abaza kulo mboniso. Ukongeza, zininzi iimveliso ezinje nge-SM kunye ne-bundle, kwaye isitayile sokuhombisa somnquba siphezulu kakhulu!
Inani labatyeleli abaqeqeshiweyo kuMboniso waBadala waseShanghai ngo-2018 lifikelele kwirekhodi, lafikelela kuma-8,321, kubandakanywa nabatyeleli abaqeqeshiweyo basekhaya abangama-6,191 kunye nabatyeleli abangama-2,130 abaphesheya kwezilwandle. "Ukuqeqesheka okuphezulu" bekusoloko kuyifilosofi yeShanghai yeeMveliso zaBadala zaMazwe ngaMazwe. Ngo-2018, lo mboniso wamisa indawo yomboniso wamazwe ngamazwe kwaye wafumana impendulo ephezulu kubantu abaninzi abadumileyo kwiimveliso zeemveliso zabantu abadala, ezingakhuthazi kuphela unxibelelwano olunzulu phakathi kwemveliso yabantu abadala nabamazwe angaphandle ikwabonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngakumbi iindwendwe zemiboniso.
Ngo-2019, uMboniso waBadala waseShanghai uza kuqhubeka nokuxhasa "ugxininiso kwiimfuno zombonisi, ukuhlonipha iingcebiso zabathengi" ukuqhubeka nokwandisa iinzame zokupapasha zasekhaya nezamazwe aphesheya, kwaye uzame ukumema iimveliso zamanye amazwe ukuba zithathe inxaxheba eShanghai ukuze zibonelele ngeemveliso ezingaphezulu abathengi basekhaya; Kwangelo xesha, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukumema abathengi behlabathi ukuba beze eShanghai kulo mboniso kwaye babonelele abathengi abasemgangathweni ngakumbi kubabonisi abakhulu
Iimveliso zabantu abadala
Izixhobo zabantu abadala, iimpahla zangaphantsi zesondo, iilekese zesini, iimveliso ze-SM, ioyile yokuthambisa, izibulala-ntsholongwane, izinto zokuthambisa, izitshizi, izixhobo zohlengahlengiso lomsebenzi wesondo, ukulibaziseka kwamanzi, iimveliso zobisi zobuhle;
Iimveliso zempilo yokuzala
Ukutya okunesondlo okulawulwa ngokwesondo, iimveliso zonyango lokuzala, impilo yokuzala kunye nezibhedlele zobuhle, ukuxilongwa kokukhulelwa kunye nongenelelo, iimveliso zezixhobo zonyango;
Iikhondom, iipilisi zolawulo lokuzalwa, izixhobo zolawulo lokuzalwa;
Ixesha Post: Apr-27-2020
I-G-Spot Vibrator, Iithoyi zesini zabantu abadala, IiVibrators zeSilicone, Clitoral Vibrator, Imivundla yemivundla, Amathoyizi eSondo aBasetyhini,